Dubai bụ otu n'ime obodo ndị kasị dị ịrịba ama n'oge a - Ịbịa Desert
Dubai otu n'ime obodo ndị kachasị mkpa n'oge a
Dubai & Safety Safety?
Nwere ike 9, 2019
14 Best Business Small Business Ideas iji Mee Ka Gị Business na Dubai
Dubai otu n'ime obodo ndị kasị dị ịrịba ama ugbu a!
Dubai - otu n'ime obodo dị mkpa n'oge ugbu a. Ọ bụ ngwakọta n'etiti ọgbara ọhụrụ, gburugburu na -eme ka ihe ga-emebi na onu ogugu di iche iche. Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ọdịnala dị iche iche n'otu ebe na mata ọdịbendị Arabic n'otu oge ahụ. Enwere ọtụtụ ebe n'obodo ahụ maka ịgagharị na maka ikpori ndụ.
Ihe mbu ichoro mgbe i rutere Dubai bu n'ọdụ ụgbọ elu mba Dubai. Otu n'ime ọdụ ụgbọelu kachasị ukwuu ma kachasị mma n'ụwa. Otu uru m ga - enye gị bụ ibute ọrụ Marhaba tupu ibia. Nke a bụ ọrụ bara uru ma bara uru na ọdụ ụgbọ elu a. Ọ ga - echekwa gị oge ma zere ọgba aghara ị nwere ike mgbe ịbịarute.
Onye na-enyere ọdụ ụgbọ elu aka ga-echere gị n'ọnụ ụzọ mbata mgbe ị bịarutere ma na-elekọta usoro ụgbọ elu niile. Naanị ịchọrọ inye ndị ọrụ gị paspọtụ paspọtụ ya ma ọ bụ onye ga na-elekọta ndị ọzọ, ebe ị nwere oge iji lelee ma “njem” ọdụ ụgbọ elu.
Ebe ọ bụ na tere aka dị nnukwu, a ga-enye gị obere ụgbọ ala, nke ga-eduga gị site n'ọnụ ụzọ mbata bịarute ELEVATOR ama ama, nke ga-eduga gị na mpaghara azụmahịa na akpa akpa. Igwe igwe a dị otu a dị ịtụnanya na-ahapụ mmetụta WOW, mgbe ị na-eme njem n'ime ya n'ihi na ọ buru oke ibu na ọ nwere ike iburu ndị 60 na kwa enwere ọda mmiri mara mma n'azụ ya iji lelee mgbe ị na-eme njem n'ime ya.
Ọtụtụ mgbe, kwụ n'ahịrị na kọstọm dị ogologo, n'ihi na ị ga-ebu ụzọ mee nyocha nyocha wee mechaa nyocha akwụkwọ ikike ahụ. Site na ọrụ Marhaba, ị nwere ike pụọ na kwụ n'ahịrị, n'ihi na ị nwere mkpa na mpaghara a họpụtara iche ma gafee ọsọ karịa ndị ọzọ. N’akụkụ ebe a na-ekwu maka ibu, a ga-enwe onye na-ahụ maka mbadamba ihe, nke ga na-elekọta akpa gị, na-ebugara gị ya na ọpụpụ, ma tinye ya n’ime ụgbọ gị, n’enweghị onwe gị nsogbu. Ọrụ a gụnyere ịnyefe visa na mbata yana ezumike pụrụ iche ebe ị nwere ike izu ike tupu ọ pụọ n'ụzọ. Yabụ na nke ahụ bụ ezigbo ọnụ iburu n'uche mgbe ị na-eleta Dubai ọ kachasị mgbe ọ bụ nke izizi.
Taa, anyị ga-achọpụta obodo a ma gosipụta gburugburu ebe obibi ya
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị bụ Dubai Marina. Mpaghara jupụtara n'ọmarịcha ụlọ oriri na ọ barsụ barsụ na ụlọ mmanya nwere ọmarịcha ụlọ oriri na ọ Burụ Burụ Burj Al Arab. Nwere ike ịnụ ahụ mpaghara Arabic na-achọ ụdị arabic nri mgbe ị nwere shisha - ngwaọrụ na-a smokingụ sịga mpaghara nwere isi dị iche iche.
Ihe omume mbụ should kwesịrị ịhapụ ịdị na-eleta Ọzara. Ọ bụrụ na ịgabeghị n'ọzara mgbe ahụ ịbubeghị Dubai.
Njem njem nke ọzara gụnyere ihe omume dị ka: Dune Bashing tinyere obere ụgbọala dị na sands. Anyịnya Kamel na-eri, na-eri nri anyasị, na-anọdụ n’elu akwa oyi akwa pụrụ iche n’elu ájá mgbe ị na-elele afọ Arab na-agba egwu - ihe ngosi dị ịtụnanya ebe ị ga-ahụ naanị na Dubai. Otu egwu kacha dị egwu ma maa mma bụ nwanyị na-agba egwu nke nwere mma agha n’aka ya, n’okpuru egwu dị n’okpuru egwu. Ọ na-egwuri egwu ma jiri ya na-egwuri egwu dị ka ihe egwuregwu ụmụaka, mana n'otu oge ahụ na-eme ka onye na-ekiri ya na iwe nọ na-eme ka ha nwee mmetụta dịka ọ nọ na igwe oge. zigara ndị anwansi Arab okwu.
Ọ na-egwuri egwu ma jiri ya na-agba egwu dị ka ihe egwuregwu ụmụaka, mana n'otu oge ahụ na-eme ka onye na-ahụ ya nọrọ na nsogbu na ịhapụ ha inwe mmetụta dịka ọ dị na igwe oge ebugharị n'ime akụkọ ọdịnala Arab ndị ahụ.
Ihe omume ozo bu Ihe osise Henna- ihe osise mara mma nke a na-eme n’aka na aka. Ọ dị ka igbu egbugbu ma nwee agba aja aja, nke ga-ewe ihe dị ka otu izu ma ọ bụ abụọ, ọ dabere n'otú ị si emeso ya na ugboro ole ị na-ekpughere ya na mmiri. Dị ka ọ na-adịkarị, ụmụ nwanyị ime obodo na-eyi ya dịka ihe ịchọ mma gbakwunyere na ekike obodo ha.
Enwere ọtụtụ ụlọ ahịa na ahịa ahịa n'ọzara, ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta na ekike ndị agba agba na-eyi- ọ bụ ekike abụọ dị iche iche na agba dị iche iche jiri obere pennies na-acha edo edo na ya, nke na -emepụta mkpọtụ ahụ ebe a na-agba egwu-ụdị usoro ikuziri. Nke ahụ nwere ike ịnọ ebe nchekwa dị ka ebe nchekwa gị. Safari safari bụ ahụmahụ na-agaghị echefu echefu nke kwesiri ekwesi mgbe ị na-eleta Dubai can nwere ike idowe njem a ngwa ngwa na otu n'ime ụlọ ọrụ mpaghara Desert safari Dubai http://www.desertsafaridubai.com/ ebe ị nwere ike ịnweta onyinye kachasị mma na ntanye na nchịkọta dị iche iche.
Ụlọ kacha elu n'ụwa Burj Khalifa
Ebe ozo nke nleta mmanye bu, n'ezie kasị elu ụwa Burj Khalifa. Isi iyi dị n'akụkụ ya bụ mmiri ịgba agba mara mma n'okpuru ụda nke usoro egwu dị iche iche na mmetụta ọkụ. Enwere ọtụtụ ụlọ nri, ụlọ ahịa na ụlọ mmanya n’akụkụ ebe ị nwere ike ịchọpụta ihe.
Ụlọ ahịa ahịa, e nwere ọtụtụ, mana ihe kachasị ewu ewu bụ Ụlọ ahịa Dubai na Nnukwu thelọ Ahịa nke Emirates. Na Nnukwu thelọ Ahịa Emirates, ị nwere ike ịhụ ebe skai ebe ọ bụ site na ihu igwe dị ọkụ na mpụga ị nwere ike ịnweta egwuregwu ski.
Ụlọ ahịa Dubai nwere nnukwu aquarium kachasị ebe ị na-ahụ sharks na ndị ọzọ dị iche iche dị n'oké osimiri.
Shoppingzụ ahịa nwekwara ike ịbụ ihe ụtọ. E wezụga ụlọ ahịa niile na nnukwu ụlọ ahịa, enwere ebe ndị zoro ezo ebe a can nwere ike ịga zụọ ahịa n'otu ụzọ dịtụ iche ma dịkwa n'okirikiri. Ọ dị mma, anyị niile maara ọnọdụ a na fim nke abụọ Mmekọ na obodo, ebe ụmụ agbọghọ na-aga ụlọ ahịa zoro ezo ịzụta akpa nke ụdị adịgboroja. Nke ahụ bụ eziokwu - Ana m ekwu maka ụlọ ahịa zoro ezo. Ndị a bụ ebe ị na-enweghị ike ịhụ n'ezie n'ihi na ha dị n'ụlọ ụlọ maka ebe obibi.
Ọ bụrụ n’ị zute onye na-ere ere n'okporo ụzọ na-akpọ gị òkù ka ị gaa lelee n’ụlọ ahịa zoro ezo, atula egwu ma jee hu hu excitingzọ a na-atọ ụtọ. Ma cheta ka o gharia !. Ndị na-ere ahịa na-atọ ụtọ, yabụ na ị ga - enwerịrị ikike ịkụghasị ọfụma ma ọ bụghị inwere ike imefu ego otutu ihe ihere na adịgboroja dị iche iche.
Anyị niile maara etu esi egbu maramara, ihe ohuru na enwu gbaa bu Dubai. Ma ọbụlagodi afọ ntorobịa nke mba a, obodo a nwekwara akụkọ ntolite. Nwere ike ịtụle ma nyochaa obodo ochie nke Dubai. Goga ebe ahụ ịkwesịrị ịnya ụgbọ mmiri ma gafere osimiri maka naanị dirhams 1 ma ọ bụ 2. Nke a bụ ahụmahụ dị ịtụnanya n’ihi na ụgbọ mmiri ndị a pere mpe ma dị mkpụmkpụ nke na mmetụta nke ime njem n’ime ya dị ka ị na-achọ ịdaba na mmiri oge ọ bụla.
Boatsgbọ mmiri nwere ike iburu 4 ma ọ bụ 5people na-adịkarị Onwere onye na akwọ ụgbọ. Mgbe i rutere n’akụkụ nke ozo, i banye n’ime anwansi kpochapuru kpam - souk ochie nke Dubai. Obere ahịa na-ejupụta n'okporo ámá. Nnukwu udiri udiri ihe di uku na otutu ihe ndozi nke igha agha na ndu gi. Nnukwu nnukwu akpa jupụtara na ngwa nri mara mma nke nwere agba, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị amabeghị na ndị na-atọ ụtọ. Na isi na isi na ikuku ị nwere ike isi na ha mata dị ụtọ na enweghị atụ nke aga ejide gi n’agha rue mgbe ebighi ebi. Nke a bụ ebe ọzọ na-ewere “Ali Baba na ndị ohi 40” akụkọ.
Dubai City - Nchikota
Ebe a ka njem anyi na akwusi, mana obodo a na-ezochi ọtụtụ ebe ndị ọzọ nke a bu ihe ijuanya na ihe omume nke ichoputa. Dubai bụ otu n'ime ihe ndị kasị adọrọ mmasị na obodo mara mma n’ụwa, nke ịchọrọ ị gaa.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ugbu a ezigbo ntuziaka maka Life na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.